Mid ka mid ah Wiilasha Col.qaddaafi oo u gacangalay dawladda ku-meel-gaadhka Libya iyo Boqor Buurmadow oo ka hadlay | Berberanews.com
Home WARARKA Dibadda Mid ka mid ah Wiilasha Col.qaddaafi oo u gacangalay dawladda ku-meel-gaadhka Libya...
Mid ka mid ah Wiilasha Col.qaddaafi oo u gacangalay dawladda ku-meel-gaadhka Libya iyo Boqor Buurmadow oo ka hadlay
Tripoli-19, November,2011-(Berberanews)- Ciidammada magaalada Obari oo ku taal saxaaraha waqooyi-galbeed ee dalka Libya, ayaa gacanta ku dhigay Seef Al-islaam Qaddaafi, oo ahaa wiilkii curad ee hoggaamiyihii dhawaan awooda lagaga tuuray ee dalkaas Col. Qaddaafi oo ay dilleen kooxaha kacdoonka kula jiray, ka dib markii ay qabteen.
Seef al-islaam oo dhuumaalayso ku jiray muddo saddex billood ku dhaw, ka dib markii dabaysha kacdoonnada isbedelku ka bilaabantay dalka Libya, ayaa muuqaalkiisa laga sii daayay Telefiishanka dalkaas, isagoo ay ka muuqdaan dhaawacyo ka soo gaadhay gacanta.
Shir jaraa’id oo uu Tripoli ku qabtay Abaanduulaha Ciidanka dawladda ku-meelgaadhka oo magaciisu yahay Bashiir, waxa uu si rasmiya ugu dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen Seef-al-islaam iyo saddex qof oo kaaliyayaashiisa ah, waxaannu xusay inay maalin taariikhi ah u tahay Libya.
Wararka la xidhiidha qabashada Seef Al-islaam oo lagu sifeeyo inuu qayb ka ahaa fur furida siyaasaddii qalllafsanayd ee aabihii ku maamuli jiray Libya iyo hindisaha in nidaam maamul oo fur furan ka hirgalo dalkaas, ayaa sheegaya in la soo qabtay isaga iyo saddex kaaliyayaashiisa ah oo damacsanaa inay ka gudbaan xuduudka Libya la leeyahay dalka Niger oo magangelyo siyaasadeed u fidiyay mid ka mid ah wiilasha ay walaalaha yihiin.
Magaalada caasimadda Tripoli waxa ka bilaabmay dabaaldegyo iyo damaashaad, ka dib markii uu soo baxay warka ku saabsan qabashada Seef Al-islaam oo ay raadinayso maxkamadda dembiyadda dagaalka ICC oo u haysata inuu dembiyo aadanimmo gala, islamarkaana markii uu soo baxay qabashadiisu codasatay in loo soo gacangeliyo, Haseyeeshee illaa hadda ma cadda waxa ay ka yeeli doonaan maaulka ku-meel-gaadhka Libya.
Sidoo kale, Ilaahay baa boqoree ninka lagu magacaabo Cismaan Buurmadow oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland oo xidhiidh saaxiintinimmo ka dhaxaysay qoyska hoggaamiyihii mudada dheer xukumayay dalka Libya Col. Qaddaafi, ayaa ka hadlay shakhsiyadda Seef Al-islaam iyo waxyaabihii uu ka yaqaanay, “Waan isnaqaanay, aabihii baanu isku baranay, dhawr jeer baanu kulanay; wuxu ahaa ninka labaad ee caruurtiisa ugu weyn. Wuxuu ahaa ninka qudha ee toosinta aabihii ka shaqaynayay intii uu siyaasadad ku jiray wax badan buu qabtay.” Ayuu yidhi Buurmadow oo u warramayay BBC-da.
Buurmadow waxa uu sheegay in Seef Al-islaam ay aabihii isku khilaafeen waxyaabo badan oo ka dhashay nidaamkii curacnaa ee Qaddaafi, isagoo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi, “Waa nin wax badan sammeeyey; waxa uu wax kala qabtay aabihii oo ay dhawr jeer isku dhaceen safiirkii Ingiriiska, 2003 buu siyaasadda soo galay, marar baa jirtay Libya dimuqraadiyad bay u baahantahay uu yidhi. waxa uu ku guulaystay hablo ajaanib ah oo dalka gudihiisa ku xidhnaa.”
Previous articleXisbiyada UDUB iyo UCID oo qaaddacay go’aankii lagu laalay diiwaangelintii hore, dalbadayna in diiwaangelin cusub la sameeyo
Next articleSaif al-Islam Gaddafi arrested in Libya